ပိုင်ဆိုင်မှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးနည်းလမ်း - World Trade Exchange
သင့်ကုမ္ပဏီတွင်ပိုင်ဆိုင်မှုများစွာပိုင်ဆိုင်သည်။ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသူတို့အားလုံးသည်သူတို့၏တကယ့်ငွေတန်ဖိုးနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုသည်သင့်အတွက်အသုံးဝင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ သင်၌မလိုအပ်သောအရင်းအနှီးပစ္စည်းကိရိယာများ၊ သို့မဟုတ်သင်မလိုအပ်သောအိမ်ခြံမြေများသို့မဟုတ်သင်၏စင်ပေါ်များမှထွက်ခွာရန်လိုအပ်သည့်အလွန်အကျွံနှေးကွေးသောသိုလှောင်ရုံများ၊ အကျိုးအမြတ်မယူရသည့်အရင်းအနှီးကုန်ပစ္စည်းများ၊ ပိုလျှံသောအိမ်ခြံမြေများ၊ မဟာဗျူဟာမဟုတ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစသည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများများရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ လက်ခံနိုင်သော ROI ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းမရှိသောအမျိုးအစားအားလုံး၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများ၊
မည်သို့ပင်ပုံစံကိုမဆို, ပိုင်ဆိုင်မှုကောင်းစွာစျေးကွက်ပေါက်စျေးထက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအလားအလာတန်ဖိုးရှိနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိစျေးကွက်တန်ဖိုးဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုရောင်းရန်ဆိုသည်မှာသင်သည်ဘဏ္lossာရေးအရှုံးကိုဖြစ်စေ၊
အစဉ်အလာအရသင်က၎င်းကိုနောင်အနာဂတ်တွင်ပိုမိုမြင့်မားသောစျေးဖြင့်ရောင်းချနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကာ၎င်းကိုဆက်လက်ကိုင်စွဲထားနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်၊ သင်က၎င်းကိုရောင်းချခြင်း (သို့) လျှော့စျေးနှင့်ယခုဖျက်သိမ်းနိုင်ခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဤပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သောအခါ၎င်းတို့သည်စာအုပ်တန်ဖိုး၏ ၁၀ မှ ၄၀% ကိုသာပုံမှန်အားဖြင့်နားလည်သဘောပေါက်ကြသည်။ ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဒေါ်လာတစ်ပြားမှဒေါ်လာတစ်သိန်းနဲ့ထုတ်ပေးမယ့်အစား၊ သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးအပြည့်အ ၀ ကို ၁၀၀% အထိသင်နားလည်သွားပြီ WTE.
၂၄ နာရီအတွင်းစိတ်ပျက်စရာပစ္စည်းများအား 3x စျေးကွက်တန်ဖိုးသို့ငွေသားအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း။
နှင့် WTEသင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရောင်းချခြင်းဖြင့်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများပြန်လည်ရောင်းချခြင်းအားဖြင့် ၁၀၀% ဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုသင်အောင်မြင်နိုင်သည် WTE ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်တန်ဖိုးများအတွက်အရင်းအနှီးကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အိမ်ခြံမြေကိစ္စရပ်များအတွက်ပုံမှန်စျေးကွက်တန်ဖိုးထက်ပုံမှန်အားဖြင့် 2-3 ဆပိုမိုများပြားသောတန်ဖိုးများရှိခြင်း၊ ထို့နောက်ကြော်ငြာ၊ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စပွန်ဆာပေးခြင်းသို့မဟုတ်ဘတ်ဂျက်မတိုင်မီကြိုတင်ဘတ်ဂျက်ထားသောကော်ပိုရေးရှင်းအသုံးစရိတ်များဖြစ်စေသင်လိုအပ်သည်ကိုဝယ်ယူရန်ငွေနှင့်ကုန်သွယ်ရေးခရက်ဒစ်များသို့မဟုတ်ထိုဝယ်ယူမှုမှပေါင်းစပ်ပါ။
အကျဉ်းချုပ် WTE ပိုင်ဆိုင်မှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးနည်းလမ်း
WTE ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်လျှင်ဖျက်သိမ်းခြင်းတန်ဖိုးအစားကုန်ပစ္စည်းများကို၎င်းတို့၏မူလလက်ကားကုန်ကျစရိတ်များဖြင့်ဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏စာအုပ်အပြည့်အဝပြန်လည်ရရှိရန်ကူညီခြင်း၊ မြို့တော်ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အိမ်ခြံမြေ။
သာဓက # 1 ။
၂၄ နာရီအတွင်းပြန်လည်ရရှိသော $ 785M ပိုင်ဆိုင်မှု WTE
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်တစ် ဦး (Fortune 500 ကုမ္ပဏီ) တွင်သူတို့၏ကုန်ကျစရိတ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၈၅ သန်းရှိပြီးအလွန်အကျွံစာရင်းရှိသည်၊ အလားအလာရှိသော ၀ ယ်သူများထံမှဒေါ်လာသန်း ၃၅၀ အထိသာကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ သူတို့ကဒေါ်လာ ၄၃၅ သန်းအရှုံးမခံချင်ဘူး၊ WTE ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏အပြည့်အဝတန်ဖိုးကို recover ရန်။ WTE ၂၄ နာရီအတွင်း ၄ င်းတို့အားဒေါ်လာ ၇၈၅ သန်းအပြည့်အ ၀ ပေးပြီး၎င်းတို့မှကျွန်ုပ်တို့မှတစ်ဆင့်လာမည့်အသုံးစရိတ်များကိုကြိုတင်တွက်ချက်ထားကြောင်းလဲလှယ်သည်။
သာဓက #2။
၂၄ နာရီအတွင်းပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောဒေါ်လာ ၅၆၇ မီလီယံတန်ဖိုးရှိအိမ်ခြံမြေတင်ပို့မှု WTE
Coronavirus ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့၏ ၀ ယ်ယူသူများ၏ကော်ပိုရိတ်အိမ်ခြံမြေတန်ဖိုးများ၏တစ်ခုမှာစီးပွားရေးကျဆင်းမှုကြောင့်သိသိသာသာစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့သည်။ သူတို့ပိုင်ဆိုင်သောရုံးမျှော်စင်အဆောက်အအုံမရှိတော့ပါ။ ၎င်းတွင်စာအုပ်တန်ဖိုးဒေါ်လာ ၅၆၇ သန်းရှိသော်လည်းလက်ရှိဈေးကွက်တွင်ဒေါ်လာသန်း ၂၀၀ ကျော်ဖြင့် ၀ ယ်ရန်ဝယ်သူတစ် ဦး ကိုသူတို့မတွေ့ရှိနိုင်ပါ။ စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျသောပိုင်ဆိုင်မှုသည်၎င်းတို့၏ငွေစီးဆင်းမှုနှင့်အသုံးစရိတ်ဘတ်ဂျက်ကိုဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်ခဲ့သည်။ WTE ဖောက်သည်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမူရင်းစာအုပ်တန်ဖိုးဒေါ်လာ ၅၆၇ သန်းဖြင့် ၀ ယ်ယူခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်သက်ဆိုင်ရာဒေါ်လာ ၃၆၇ သန်းအရှုံးနှင့်စာရေးစားခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည်။
သာဓက #3။
၂၄ နာရီအတွင်းပြန်လည်ရရှိသောပိုလျှံသောပစ္စည်းများ၏ဒေါ်လာ ၂.၅၃ ဘီလီယံတန်ဖိုး WTE
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုသည်နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၀ ကျော်တွင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသောနိုင်ငံစုံစွမ်းအင်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိရောက်သောစွမ်းဆောင်ရည်များတိုးတက်စေရန်နှင့်အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမြှင့်တင်ရန်အရင်းအနှီးကိုထုတ်လုပ်ရန်ကုမ္ပဏီသည် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးခဲ့သည် WTE ရေနံတူးစင်များနှင့်ရုံးသုံးပရိဘောဂများအပါအ ၀ င်၎င်း၏များပြားလှသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရောင်းချရန်။ WTE ၂၄ နာရီအတွင်းအပြည့်အဝဒေါ်လာ ၂.၅၃ ဘီလျံကိုအပြည့်အဝပေးခဲ့ပြီးသူတို့ကသူတို့အားငါတို့မှတစ်ဆင့်လာမည့်အသုံးစရိတ်များကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့်အတွက်လဲလှယ်သည်။
၁ ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကုန်သွယ်မှုခရက်ဒစ်ဖြင့်ငွေပေးချေခြင်းဖြင့်အနာဂတ်ဝယ်ယူမှုများသို့ရောင်းချသည် WTE.
၂ ။ အချို့မှာ WTEဖောက်သည်များသည်ပိုင်ဆိုင်မှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွင်ငွေပေးချေမှုအဖြစ်ငွေသားလက်ခံလိုကြသည်။ ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ WTE ဝယ်ယူမှုအသစ်တစ်ခုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်၊ စီးပွားရေးအသုံးစရိတ်များရန်ပုံငွေသို့မဟုတ်ငွေသားစီးဆင်းမှုကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်ငွေသားအဖြစ်သာပေးသည်။ ငွေသာငွေပေးငွေယူတွင်ဖောက်သည်သည်ပုံမှန်ကုန်သွယ်မှုမှပစ္စည်းတန်ဖိုးကိုနှစ်ဆမှသုံးကြိမ်အထိစျေးကွက်တန်ဖိုးဖြင့်ရောင်းချပြီးငွေကိုအမြန်ငွေသားလက်ခံသည်။ WTE client များအတွက်တစ် ဦး ကအခြားရွေးချယ်စရာငွေကြေး entity ဖြစ်လာသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်ဖောက်သည်သည်မီဒီယာ၊ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့်သတ်မှတ်ထားသောငွေပမာဏကို ၀ ယ်ရန်သဘောတူညီမှုတစ်ခုရရှိသည် WTE.
၃။ ကုန်သွယ်ရေးချေးငွေနှင့်ငွေပေါင်းစပ်ခြင်း - အချို့ကိစ္စရပ်များတွင်အကောင်းဆုံးအရောင်းအ ၀ ယ်သည်ကုန်သွယ်ရေးအကြွေးနှင့်ငွေသားတို့ကိုပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ WTE တိကျသောလိုအပ်ချက်များနှင့်အကျိုးစီးပွားများကိုနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ထို့နောက်၎င်းတို့ကိုဖြေရှင်းရန်အထိရောက်ဆုံးနှင့်ထိရောက်သောအစီအစဉ်ကိုတည်ဆောက်သည်။
ပိုင်ဆိုင်မှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးငွေပေးငွေယူသည်စနစ်တကျရှိသောဘဏ္financeာရေးပိုင်ဆိုင်မှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးငွေပေးငွေယူဟုလူသိများသောငွေသားပါဝင်မှုကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ ဘဏ္structာရေးစနစ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောဘဏ္Assာရေးပိုင်ဆိုင်မှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးသည်ငွေကြေးနှင့်ဆက်စပ်သောတာ ၀ န် ၀ တ္တရားများဖြစ်သည်။
WTE (၁) ကုန်သွယ်ခြင်း၊ ရရန်၊ အရင်းအနှီးကုန်ပစ္စည်း၊ အိမ်ခြံမြေစသည်တို့ကဲ့သို့ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ကုမ္ပဏီအတွက်ငွေပေးချေသည်။ ; နှင့် (ii) သတ်မှတ်ထားသောမီဒီယာ၊ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် / သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ (ကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီးဘတ်ဂျက်အသုံးစရိတ်များ) အားငွေသားလုံး ၀ ၀ ယ်ယူရန်ကုမ္ပဏီ၏သဘောတူညီချက်။ WTE (ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်တူညီသောစီးပွားဖြစ်အသုံးအနှုန်းများတွင်)၊ နှင့် / သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအနေဖြင့်အချို့သောခြွင်းချက်မရှိသောပုံမှန်ငွေပေးချေမှုကိုပြုလုပ်ပါ (ဆိုလိုသည်မှာ၊ အကယ်၍ ၀ ယ်ယူမှုများသည်ကုမ္ပဏီမှသဘောတူညီမှုအဆင့်သို့မရရှိပါက) ။
အဆိုပါကုမ္ပဏီနှင့် WTE ၏သတ်မှတ်ထားသောအဘို့ကိုသဘောတူသည် WTEငွေတောင်းခံလွှာကိုကုန်သွယ်မှုအချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးမကြာမီငွေပေးချေမှုကိုကြိုတင်ပေးချေမည့်ပမာဏဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီမှတဆင့်ဝယ်ယူမှုစေသည်အဖြစ် WTE ကုမ္ဗဏီသည်ကုန်သွယ်ရေးအချက်သည်ကြိုတင်ပေးချေမှုပမာဏကိုကြိုတင်ပေးချေပြီးဖြစ်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကုမ္ပဏီသည်အခါအားလျော်စွာငွေပေးချေရန်လိုအပ်သည်။
အဆိုပါစနစ်တကျဘဏ္financeာရေး၏အဓိကအင်္ဂါရပ် WTE Asset Recovery transaction သည်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏မျှတသောစျေးကွက်တန်ဖိုးထက်ပိုသောငွေများနှင့်ကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီးဘတ်ဂျက်အသုံးစရိတ်များကိုပြုလုပ်ရန်ခြွင်းချက်မရှိသော ၀ င်ငွေကိုရရှိသည်။ WTE.
ဤ PDF နှင့် PPT တင်ပြချက်များကိုဒေါင်းလုပ် ချ၍ ပိုမိုလေ့လာရန်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ PPT ထံမှပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမည်သို့ဝယ်ယူပြီးအလွန်အကျွံရောင်းချခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ဝယ်ယူမည်နည်း
ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်စာရင်းအားကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ ၀ ယ်သည်ကိုဥပမာတစ်ခု
ပြ#နာဆန်းစစ်ချက် ၁ - ၂၄ နာရီအတွင်းရောင်းစားရသောဒေါ်လာ ၁၃၀ မီလီမီတာ
ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှု ၂ - ၂၄ နာရီအတွင်းရောင်းချခဲ့သောပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးဒေါ်လာ ၁.၈ ဘီလီယံ
သင်၏တီထွင်သူအားလုံးကို ၂၄ နာရီအတွင်းမည်သို့ရောင်းချမည်နည်း
၂၄ နာရီအတွင်းဒေါ်လာ ၄၃.၅ သန်းတန်ဖိုးရှိပစ္စည်းများကိုရောင်းခဲ့သည်
“ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကအိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်မှုတွေအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်တယ်ဆိုပေမယ့် ၂၄ နာရီအတွင်းဒေါ်လာ ၄၃.၅ သန်းတန်ဖိုးရှိအိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်မှုကိုကုန်သွယ်ရေးလဲလှယ်ရေးလုပ်ငန်းကဘယ်လိုကူညီပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယနေ့အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်အများစုကကျွန်တော့်ကိုသဘောတူကြပါတယ်။ အလုပ်ကောင်းတယ်!”
Scottie Hitchman-LA ။ ကယ်လီဖိုးနီးယား
၂၄ နာရီအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၉ သန်းတန်ဖိုးရှိသံမဏိထုတ်ကုန်များကိုရောင်းချခဲ့သည်
"ဒါဟာတကယ့်ကိုအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဝန်ဆောင်မှုပဲ။ ကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီသည်ကုန်သွယ်ရေးလဲလှယ်ရေးစင်မြင့်မှ ၂၄ နာရီအတွင်းဒေါ်လာ ၂၉ သန်းတန်ဖိုးရှိသံမဏိထုတ်ကုန်များကိုရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်တမ်းများမှဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အလားတူဝန်ဆောင်မှုများအကြားတွင်အမြန်ဆုံးဖြစ်သည် ငါဒါကိုအထူးအကြံပြုလိုတယ်။
Elvira ဒင်း - နယူးယောက်မြို့
“ ၂၄ နာရီအတွင်းလာမယ့် ၃ နှစ်အတွင်းမှာငါတို့ဟိုတယ်တည်းခိုခန်းအားလုံးကိုရောင်းနိုင်တဲ့အကူအညီကြောင့်သင့်ရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုငါထောက်ခံတယ်။ ငါတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်။ "
Jaimie Lagrone-Houston, Texas
၂၄ နာရီအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂.၃ သန်းတန်ဖိုးရှိ Fiber Optic ပစ္စည်းများကိုရောင်းချခဲ့သည်
“ မင်းတို့ဒီမှာဒီမှာကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေတယ်။ ဒေါ်လာ ၁၂.၃ သန်းတန်ဖိုးရှိကျွန်ုပ်တို့၏ Fiber Optic ပစ္စည်းအားလုံးကို ၂၄ နာရီအတွင်းရောင်းချခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်သည်ထိုအတွေ့အကြုံကိုဝေမျှရန်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
GU ည့်သည်များမပါဘဲ 5x BY 100- ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်ဝင်ငွေတိုးမြှင့်။
ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်ရှိဟိုတယ်တစ်ခုသည်ရောင်းအားကို ၁၀၀X တိုး။ ၂၄ နာရီအတွင်း ၀ င်ငွေဒေါ်လာ ၆၄၀ မီလျံရရှိခဲ့ပြီး COVID-5 ပိတ်ဆို့မှုအတွင်း guests ည့်သည်အသစ်များမ ၀ င်ခဲ့ပါ။
ကြော်ငြာခြင်းမပြုဘဲ ၂၄ နာရီအတွင်းရောင်းချခဲ့သောအလွန်အကျွံငွေပမာဏ၏ဒေါ်လာ ၁.၃ ဘီလီယံ။
စက်ရုံထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများက ၂၄ နာရီအတွင်းဒေါ်လာ ၁.၃ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိပစ္စည်းများကိုရောင်းချခဲ့သည် WTE မည်သည့်ထုတ်ကုန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသို့မဟုတ်ကြော်ငြာခြင်းမရှိဘဲ။